I-Google nokusebenzisana kwayo ne-ISIS | Ngivela kwa-mac
I-Google nokusebenzisana kwayo ne-ISIS
Impi engu-3.0 elwelwa emhlabeni ihlelwe yi-intanethi. Kuyinto esiyaziyo ngemuva kokuboshwa ngakunye kwe-jihadist. Noma ngemuva kokuhlakazwa ngakunye kweseli lamaphekula elixhumene nokunyakaza okweqile. Izindlela zokuxhumana, ezisiza ukuqeqeshwa nokukhula kwabo, yi-intanethi. Futhi okukhathaza kakhulu, ukuqashwa kwabantu abasha kulezi zinhlangano.
Nsuku zonke izinkulungwane zabancane, noma abantu abasha beminyaka ehlukahlukene bakhangwa yilezi zinethiwekhi. Kusukela ekungazini noma kwimfundo abayitholile, basondela kulolu hlobo lwengozi ngaphandle kokwazi kahle ukuthi imayelana nani. Futhi ku-intanethi lapho cishe amaphesenti ayikhulu woxhumana nabo bokuqala enzeka khona.
1 I-logarithm enjini yokusesha esiza iziphathimandla
2 Imiphumela "isiheho" kusesho lwe-Google.
3 I-Youtube iphuzu lemininingwane elizimele elifundwayo
I-logarithm enjini yokusesha esiza iziphathimandla
-Google, ngokubambisana nohulumeni abakhulu bomhlaba wenza ingxenye yakho ukuze lokhu kungenzeki. Noma okungenani ukuze kube nokulawulwa yiziphathimandla. Futhi ukuthi basebenzela ukuvimbela noma ngandlela thile ukukhawulela lezi zindlela. Inhloso yalokhu kusebenzisana misa ukumiswa okungapheli okwenziwa yilaba "mafia".
Yize "kuwulwazi olujwayelekile" ukuthi ohulumeni bangakwazi ukufinyelela ekushicilelweni ngamagama athile angukhiye. Futhi kuyiqiniso ukuthi iGoogle isivele ibambisene ne-logarithm eqoqe le datha. Le phrojekthi iyaqhubeka. Ngohlelo olwenziwe ngu I-Jigsaw, inkampani, i-Google incubator, iyi- wenze ucwaningo ngemiphumela emangazayo.
Injini yokusesha yakwaGoogle, ngaphezu kokufakwa kwamagama asemqoka, ihlaziya imvamisa yalokhu kusesha. Lezi amagama angukhiye Afakwe ngochwepheshe abehlukene emkhakheni. Cishe ngamagama angama-1700 ama-Arabhu, futhi cishe i-Anglo-Saxon eyi-1000. Futhi kunjalo ukuhlanganiswa kokuningi kwalokhu okwazi ukudala iphrofayili ephenywayo.
Imiphumela "isiheho" kusesho lwe-Google.
Manje iGoogle, ngaphezu kosesho oluhlinzeka ngokujwayelekile, ifaka imiphumela "yesithiyelo". Lezi zilingo azilutho ngaphandle amakhasi aheha abangaba nentshisekelo ezimfundisweni ze-ISIS. Futhi imiphumela enikezwa izinyanga ezimbili zokuhlolwa iyethusa ngempela. Amaminithi ayizinkulungwane ezingamakhulu ayisihlanu amavidiyo abukwe abasebenzisi abayizinkulungwane ezingamakhulu amathathu namashumi amabili. Futhi ukuhlala unomphela kulawa mawebhusayithi kungaphezu kwesilinganiso kwezinye izinhlobo zamawebhusayithi anokuqukethwe okuhlukile.
Lawa ma-tech bait enza izinto ezimbili. Ngakolunye uhlangothi, kuyaziwa ukuthi yibaphi abasebenzisi abakhombisa intshisekelo kulolu hlobo lokuqukethwe. Ngakolunye, amavidiyo abafinyelela kuwo enziwe ngokukhethekile ukukholisa okuphambene nemfundiso ye- "Islamic State". Umqondo ubukeka muhle, kepha impela awenele. Futhi into esihlala sizibuza yona. Uma sazi ukuthi la "maheyi" akhona. Abantu ababi sebevele bayayazi, akunjalo? Ukuhlaziywa eceleni, konke okusebenzela ukuqeda lesi sihlava kwamukelekile.
Amandla we-Google nokuqukethwe kwayo kucacile futhi. Futhi nokuningi okuvela ku-YouTube. Ucwaningo olwenziwe nguYasmin Green, umqondisi wocwaningo lweJigsaw, kanye nomhlanganyeli kulo msebenzi kuveza izinkomba ezimbalwa. Ngokusho kukaGreen, umuntu ohlobene nemibono ye-ISIS finyelela imininingwane emsulwa engenzeka. Lokho kusho ukuthi, ayikwethembi okuqukethwe okuvela eziteshini zethelevishini, okungathonywa noma kusetshenziswe.
I-Youtube iphuzu lemininingwane elizimele elifundwayo
I-YouTube yindawo engcono kakhulu yokuthola amavidiyo acacile osesho oluthile. Futhi lokho kuseshwa yikhona okufundwayo. Ngokusebenzisa isihlungi segama elingukhiye, ungaba nemibono yokuqala uphenyo. Kepha kunenkinga enkulu. Yini okufanele uyenze uma lokhu kusesha kungenziwa ku-Google? Yebo, okwamanje lokho kulawula cishe akunakwenzeka.
Njengoba kunokuqapha okuningi kuma-akhawunti asolisayo kumanethiwekhi omphakathi, kunzima ukuthola lokhu okuqukethwe. Futhi ngendlela efanayo, kunzima ukuthola abantu abafuna lokhu okuqukethwe. Njengamanje, lapho sekuqashwe okokuqala, abezindaba bezokwaziswa bangasese kakhulu. Futhi lapha kungena futhi inkinga enkulu okushiwo nokubhalwa okuningi ngayo.
Ubumfihlo buqhathaniswa nokuphepha. Kuyacaca ukuthi akekho umuntu othanda ukuhlohlwa. Ngaso sonke isikhathi sifuna ukugcina impilo yethu kubo bonke abantu. Kepha lokhu kuza ngentengo. Njengoba izingxoxo eziphakathi kwemilayezo cishe yazo zonke izinhlelo zokusebenza zemiyalezo zazibethelwe, ukulandelela cishe akunakwenzeka. Kepha okwamanje iGoogle inikela ngohlamvu lwayo lwesihlabathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » I-Google nokusebenzisana kwayo ne-ISIS
Thola iMac yakho bese uzobona ukuthi iziphi izici zeMacOS Sierra ongazisebenzisa
I-Apple Pay ingeza ukuxhaswa kwamabhange amasha angama-30 nezikhungo zezikweletu e-United States